Programme PROSPERER » FOFIFA FOFIFA – Programme PROSPERER
“Tena mahavelona tokoa ny asa fihariana fambolena rehefa ifotorana”, hoy i DOMOHONARISOA
Kaoperativa Famokarana Masomboly Mitsiry na KOFAMAMI dia fikambanana iray hita ao amin’ny Fokontany Antoby Atsimo, Kaominina Ambanivohitra Antanetibe Mahazaza (distrika Ambohidratrimo), 5 Km miala ny Kaominina ary mianatsimo. Mamboly sy mamokatra ary mivarotra « Masomboly » no tena asa iveloman’ny Kaoperativa. Tamin’ny taona 2006 no nanomboka nisy ny Vondrona/Fikambanana miisa fito (07) tao Antoby Atsimo. Efa namokatra…
RANDRIANIAINA Solofoniaina Jean Richard na I Richard dia mpisehatra amin’ny resaka famokarana zanakazo ao amin’ny Kaominina Ambalavao, Fokontany Ambohibary. Isan’ireo seha-pihariana tena mamokatra sy mivarotra zanakazo izy ary ireo asa roa ireo no tena andaniany ny fotoanany amin’ny andavan’andro. Tsy miasa irery anefa izy amin’izany sehatr’asa izany fa manampy azy ireo vady aman-janany amin’ny fanatanterahana…